Soosaarida Jumlada Griffonia 5-HTP 99% Budada Taageerada Niyad Jumlada Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Finutra
Soosaarida Abuurka Griffonia 5-HTP 99% Powder Taageerada Jumlada Jumlada
Asal ahaan: Griffonia simplicifolia
Fiinta X bilaash ah, dareeraha bilaashka ah
Shixnado joogto ah oo loo diro Mareykanka iyo EU. suuqa
Warbixinnada Xisbiga 3aad waa la heli karaa
PAHs / Solvent hadha / Microbiological / -Heavy metal iyo TPC
Kosher, ISO9001, Xalaal shahaadooyinka
Niyad jab: 5-HTP cilladaha la aaminsan yahay inay ka qayb qaataan niyad jabka. Kaabista 5-HTP ayaa la muujiyey inay wax ku ool u tahay daweynta niyad-jabka khafiifa ama dhexdhexaad. Caafimaad ahaan
tijaabooyinka 5-hydroxytryptophan waxay muujiyeen natiijooyin la mid ah kuwii lagu kasbaday daawooyinka lidka ku ah diiqadda ee imipramine iyo fluvoxamine.
Fibromyalgia: Daraasaduhu waxay muujinayaan in 5-HTP ay xoojiso isku-dhafka serotonin, taas oo kordhinaysa dulqaadashada xanuunka iyo tayada hurdada. Bukaannada qaba fibromyalgia waxay soo sheegeen horumarin
calaamadaha niyadjabka, walwalka, hurdo la’aan, iyo xanuun somatic ah (tirada meelaha xanuunka leh iyo adkaanta subaxnimada).
Hurdo la’aan: Tijaabooyin badan, 5-HTP waxay yareeysay waqtiga loo baahan yahay in la seexdo iyo tayada hurdo ee la hagaajiyay ee dadka la il daran hurdo la’aanta.
Migraines: 5-HTP wuxuu yareeyay soo noqnoqoshada iyo darnaanta madax xanuunka dhanjafka ee tijaabooyinka caafimaad. Sidoo kale, waxyeellooyin aad u yar ayaa lagu arkay 5-HTP marka loo barbar dhigo kuwa kale
dawooyinka madax xanuunka dhanjafka.
Cayilnaanta: 5-hydroxytryptophan waxay abuurtaa dareen buuxa - qancinta rabitaanka qofka si dhakhso leh. Taas oo u oggolaanaysa bukaannada inay si fudud ugu dhegaan cuntada. Waxa kale oo la muujiyey inay hoos u dhacday
qaadashada karbohaydraytka bukaannada buuran.
Madax xanuunka Carruurta: Carruurta qaba madax-xanuun la xiriirta hurdo la'aan waxay umuuqdaan inay ka jawaabayaan daaweynta 5-HTP.
Magaca Product: 5-HTP Soosaarida abuurka Griffonia
Qeybta la Isticmaalay: Abuur
Xal loo isticmaalay: Biyaha & Ethanol
Xigasho: Griffonia simplicifolia
Aan ahayn GMO BSE / TSE Bilaash Irridiation Allergen Bilaash ah
Shayga QIIMEYNTA Hababka
Muuqaal Fiican budada Off-cad Himilada
Mesh Size 95% dhaaf 80M USP <786>
Khasaare Dhimista ≤5% USP <731>
Dambaska ≤5% USP <281>
Fiinta X Taban HPLC / USP
Biraha Culus Pp 10ppm ICP-MS / USP
Lead (Pb) Pp 0.5ppm ICP-MS / USP <730>
Arsenic (As) Pp 0.5ppm ICP-MS / USP <730>
Cadmium (Cd) 0.1ppm ICP-MS / USP <730>
Mercury (Hg) 0.1ppm ICP-MS / USP <730>
Wadarta Tirada Tirada C 1000cfu / g USP <2021>
Caaryo iyo khamiir C 100cfu / g USP <2021>
E.Coli Taban / 10g USP <2022>
Salmonella Taban / 10g USP <2022>
00700 EN 13751:2002<PSL>
Cabbirka baakadka 5kg / bac, 25kg / durbaan
Kaydinta Ku keydi meel qabow oo qallalan, adigoo si toos ah uga ilaalinaya iftiinka qoraxda
Nolosha shelf Laba Sano
Hore: Curcumin Turmeric Root Soosaarida Budada Curcuminoids-95%
Xiga: Lycopene Tomoato Soosaarida Powder Farmashiyaha Waxyaabaha Budada ah, Saliida, Beadlets
Lycopene Tomoato Soosaarida Daawada budada ah ...
Canabka Soosaarida Budada Proanthocyanidins Pol ...
Huperzine A Powder 1% 98% Daawada Dhirta Shiinaha ...